Amathumba egazi eBlogger njenge-SEO esasazekayo Ingcaciso iyasasazeka | Martech Zone
Amathumba egazi eBlogger njenge-SEO esasazekayo
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kuthi, uhlobo lokuhlaselwa kwe-SEO kutyhilwe kule veki ngamanyathelo nje ambalwa ukusuka kwiitoni zeblogger / iwebhusayithi ezenza yonke imihla: ngabom zama ukwenza iinjongo zokukhangela umdlalo ukuze bafumane ukubetha okungaphezulu kwindawo yabo, kwaye ngolwandiso, mhlawumbi yenza iidola ezimbalwa ezongezelelweyo. Ngaphandle kokuba uqhuba umkhonyovu othe ngqo-kwifama okanye kakhulu, ngethamsanqa- elona nqanaba liphezulu lenjini yokukhangela kwihlabathi alizukufumana zibonelelo ezihlala zihleli ukuba umxholo awukho.
Ingcuka enye enomsindo
Iposi elipheleleyo lafumana impendulo eqinileyo evela kuMichael Ibhlog ye-SEO yeGreywolf, Ngubani na othi Christina sisidenge esingazi nto. Olu hlobo lolwimi lomelele kancinci, andizukumhlasela ngokobuqu uChristina, kodwa ndiza kuthi iposti yakhe yayikukuhlaselwa ngabantu abanjengam-abasebenza iibhloko zethu ngokuthanda kunye nobuchwephesha bobuchwephesha ukutsala nokugcina okuninzi abafundi.
Ukuqonda itekhnoloji yeinjini yokukhangela kunye nokwenza indawo yakho ingafani nophando lwendlela kunye nokufumana eyona ndawo yokugcina ivenkile yakho yekona. Unemveliso entle kunye nevenkile enkulu, ayikokwengqondo ukubeka ivenkile kwindawo efanelekileyo? Injalo midlalo Ngaphandle kokuba ubeke ivenkile yakho phakathi entlango apho kungekho mntu unokuyifumana khona?
UChristina ukwabonakala engazi ngesakhono sikaGoogle sokuhlalutya ngokuchanekileyo kunye nenqanaba lokudibanisa. Inyaniso iya kuxelwa, ungayenza yonke imidlalo onokuyithanda, kodwa ukuba akukho mntu ubhekisa kwindawo yakho, awuyi kuba semgangathweni ixesha elide. Ukuthandwa sisitshixo kwiwebhu, kwaye iibhlogi ziyanceda ukuqhuba ukuthandwa kwabanye. Ndenza amakhulu okukhangela kuGoogle mihla le, kwaye kunqabile ukuba ndifumane iphepha elibekwe phezulu elingenalo ulwazi endilifunayo.
Ngaba kubhloga Ithuba? Ngokuqinisekileyo!
Ukuba awuwasebenzisi amathuba awenziwe ziinjini zokukhangela, usisiyatha. Andingo midlalo Inkqubo ngokujonga kulwakhiwo lwephepha lam, umxholo, ukhetho lwamagama aphambili, njl. ukundifumana ngokulula kwaye ndiququzelele umxholo wam ngokufanelekileyo.
UGoogle ubhale iresiphi yokuba zonke iisayithi ezilungileyo kufuneka zilandelwe. Ukuba awukwazi ukulandela iresiphi, ungakhalazi kum ukuba isidlo sakho sangokuhlwa sinambitheka njengoburhabaxa xa kuthelekiswa nam. Yiya ekuphekeni, landela imiyalelo… kwaye ucele uncedo xa ulufuna!
tags: izinto ezilungileyoukuphuculwa kwe-imeyileuluhlu lwe imeyileuluhlu lokuphucula i-imeyileiflopopimbali yentengisoLinganisa i-CPmarblesubukrelekrele kwezentlaloezona ndlela zokuzonwabisa zilungileyoiingcebiso zentlalo
IBlack Swan kunye nePeanut Butter kunye neJelly Sandwiches
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2007 ngo-12: 44 AM
UDoug: Izimvo zayo ezinje ndibuyela kwindawo yakho. Inengqondo kwaye icacile. Ulungile ngokupheleleyo kuloo mzekeliso kunye nevenkile entlango.
Ukuthengisa kubaluleke kakhulu xa inkampani enkulu isasazeka kakhulu ngolwazi kwaye kubalulekile ukufikelela kumthengi wakho. Akukho ndleko zonke nangona iindlela ezifana nogaxekile ndizicekisa kakhulu…
Ngeeblogi abantu abancinci banendlela entsha yokufumana inyaniso yabo kwaye abantu abakhulula amandla abo bayacaphuka. Ndicinga ukuba kungumqondiso ukuba bacinga ukuba iinyani ezingezizo ezabo azilunganga kwaphela…
Bazakuba nokuvuka okunzima…
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2007 ngo-9: 14 AM
Enkosi ngamazwi akho anobubele, Bengt! I-Intanethi ngokwenene ilingane ngokulinganayo.
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2007 ngo-2: 38 PM
Kuvakala kum ngokungathi izimvo zikaChristina malunga "nokudlala" zibhekisa ngakumbi kwabo basebenzisa ubuchule bokwenza umnqwazi omnyama. Isisiseko ukulungiswa kweblogi / indawo yinto ekufuneka bayazi bonke abathengisi okanye bagqibela ngokushiya "umdlalo" ngokungagqibekanga… Ndiyakholelwa ukuba ubuncinci uyayiqonda loo nto kwaye uchanekile malunga nokuba nomxholo okanye enye into.
Ngokwazi kukaGoogle ukubeka ngokuchanekileyo amaphepha… alungile ngokwaneleyo, kodwa ndenze uphando apho uluhlu oluphezulu alunanto yakwenza nokhangelo ngaphandle kwamagama aphambili abonisa isicatshulwa ngamanye amaxesha.
Nangona ndiyiqonda kakuhle yonke into oyithethayo uDoug, bendifuna ukulunga kuChristina-andiqondi ukuba uyiyo lilonke isidenge.
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2007 ngo-3: 12 PM
Mhlawumbi yingxaki leyo, uWilliam. UChristina akahlukanisi ngamnye, umane esenza yonke ibhlogosphere kunye kwaye uthi yingxaki, hayi isisombululo.
Nantsi enye into:
Zininzi iintetho ngaphakathi kuluntu lobuchwephesha, ngakumbi ibhlogosphere malunga nokusebenzisa i-SEO kunye nokuba ilungile njani kwiibhlog kwaye ayichaphazeli kakubi abafundi / abaphandi / abasebenzisi abaqhelekileyo. Bubuxoki obu.
I-SEO ayilunganga ngabafundi kunye nabaphandi? Ngokwenene? Konke kuxoka kwaye iibhlog zinefuthe elibi kwiziphumo zokukhangela? Ndifumana uninzi loncedo lwam kwiiblogi, hayi iisayithi ezinencwadana… uncedo lokufumana abathengisi, uphuhliso, i-SEO, intengiso, itekhnoloji… kunqabile ukuba ndifumane izinto ezingcono ngaphandle kwebhlogosphere.
Ndiyakholelwa ukuba iibhlog zihlala zivulekile, zithembekile kwaye zilungelelene kunamawebhusayithi eenkampani. Kungenxa yoko le nto abantu bebahoye kakhulu- kwaye kwakhona-uGoogle ubabeka phezulu. Iinkampani aziyithandi le nto… enyanisweni, bayayicekisa kuba inokubanyanzela ukuba bavule kwaye baqale ukubhloga ngokwabo.
Imithombo yeendaba yayisoloko icinga into enye, isoloko inkqonkqoza ibhlogosphere kwaye isola bonke ooyeha bayo kwi-Intanethi kwiibhlog. (Kanye njengoko batyhola abantu ukuba bayafa kwi-eBay kunye neCraigslist). Ubuncinci iMedia Media ikrelekrele, nangona kunjalo, ngoku babhloga!
Konke malunga nonikezelo kunye nemfuno. Ndicinga ukuba uChristina unayo yonke into engalunganga kuba abantu bafuna olu hlobo lomxholo. Iiblogger aziyongxaki. Ukungazi nto.
PS: Andicingi ukuba uChristina 'sisidenge', nokuba. Ndicinga ukuba akanalo uluvo oluqinisekileyo ngobume bokukhangela, indlela aziphatha ngayo kwi-Intanethi, kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokufanelekileyo. Ndiyazi abantu abaninzi abanjengoChristina!
Ngomhla wama-3 ku-Disemba 2007 ngo-9: 02 PM
Njengayo yonke into, kukho umgca olungileyo phakathi kokulungileyo nokungalunganga (kubi). Ndicinga ukuba kuxhomekeke kuwo wonke umntu ngokwabo ukwenza lo mahluko, kodwa ngokubhekisele kubhlogosferi kunzima kwezi ntsuku ukwenza into eyenzekayo ngaphandle kokuphumeza ubuchule obuphambili be-seo. Ukuba ufunda ibhlog kaMat kule ubona iingxelo “awufanele uyenze le naleya kodwa ukuba…” - lol 🙂
Ngomhla wama-4 ku-Disemba 2007 ngo-2: 10 PM
Ngokwenyani lo ufana "nomdlalo" kuba sonke kufuneka sihlengahlengise umdlalo "wokufumana" ngeendlela ezihamba phambili… kodwa oku kunjalo ikhona Shishini.